မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Dec 26, 2013 in Politics, Issues | 21 comments
မကြာမီ ၂၀၁၃ သည် အတိတ်ဖြစ်တော့မည်။
မကြာမီ ၂၀၁၄ သည် ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်တော့မည်။
မကြာမီ ၂၀၁၅ သည် အနာဂတ် ဖြစ်တော့မည်။
အတိတ်သည်၎င်း ပစ္စုပ္ပန်သည်၎င်း အနာဂတ်သည်၎င်း
ကျတော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့မည် ရောက်ရှိလာမည် မျော်ကြည့်ရမည်။
နိုင်ငံရေးအမြင်ဖြင့်မြင်ကြည့်ပါလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့
မျော်လင့်သော တောင့်တသော အချက်မှာကား ယေဘုယျအားဖြင့်
၁။ အစိုးရမဟုတ်သော သို့ အာဏာလက်ဝယ်မရှိသော နိုင်ငံရေး
တက်ကြွလူပ်ရှားသူ များ အားလုံး၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်
စစ်တပိုင်းအစိုးရ လုံးဝဥဿုံ ပြုတ်ကျရေးသည်သာ ဖြစ်သည်။
၂။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် လက်ရှိ အာဏာရ စစ်တပိုင်းပါတီသည်
နိုင်ငံရေးလူပ်ရှားသူအားလုံ၏ ရည်မှန်းချက်ကို အထက်ပါအတိုင်း
ရှု့မြင်ပြီးဖြစ်၍ မဖြစ်မနေ နည်းစုံသုံး၍ ဆက်လက်ရပ်တည်
အထက်ပါအချက် များကို ဆင့်ပွားသုံးသပ်ရလျှင်-
a. အစိုးရသည် ကုလားထိုင်ကို မထိသ၍ အေးအေးဆေးဆေး
b. အကြီးဆုံးအတိုက်အခံပါတီကလည်း ခေါင်းဆောင်ကို
ချုပ်လိုက်ရင်တော့ တသတ်မတ်ထိုင်ခုံ နဲ့ တဦးတည်းပုဂ္ဂုလ်ရေးဆည်းကပ်မူ့။
ဒီနှစ်ခုက လက်ခံနိုင်သည်ဖြစ်စေ မခံနိုင်သည်ဖြစ်စေ
သူတို့ ကုလားထိုင်ကို အထိမခံတာသည် ပြည်သူတွေဆက်ဆိုးကျိုးခံရဖို့ဖြစ်ပြီးးးး
အတိုက်အခံပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို အထိမခံနိုင်ခြင်းသည် ပြည်သူကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ မျှော်လင့်နိုင်၍ဖြစ်သည်။
တူတူ တတန်းတည်းထားပြော၍ မရ။
ကျတော်ကတော့ လူစု စိတ်ဓါတ် အားကိုပဲပိုကြိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည် အနာဂါတ်ကို သူတယောက်တည်းတည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။
သူရဲ့ဦးဆောင်မူ့နောက်မှာ အရည်အသွေးအပြည့်အဝ အလုံအလောက် လိုက်ပါနိုင်မှ ပါ။
တစ်ပါတီစနစ်ဆိုတာနဲ့ တူနေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။မြင်နေတယ်။
ကြည့်လေလေ မြင်လေလေ တွေ့လေလေ။
ကွကိုယ် အေးချေးနေပါကွယ်… မဂျီးတို့ မိန်းခေးဒွေပဲ လှုပ်ရှားသွားပါမယ်…
ညန်မာ မိန်းခေးအသင်းနိုင်တာကကော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဲလားဟင်…. ငင်င်င်င်င်င်…
မမကြီး မိန်းခေးအသင်း ဘယ်မှာနိုင်သွားတာတုန်းဗျ။
အော် ဆီးဂိမ်း တတိယနေရာလုပွဲ မှာနိုင်တာကိုပြောတာလားခဗျ။
ခုလဲ ဒေါ်စု မိန်းခေးအသင်းနိုင်သလိုတော့ နိုင်နေပါတယ်ခဗျ။
ဗိုလ်ဆွဲဖို့တော့ ထိုင်းအသင်းလို ကစားသမားတွေသာမက သက်ဆိုင်ရာ
ဒေါ်စုကို အဖွဲ့ချုပ်တခုလုံး မြန်မာတမျိုးသားလုံးနဲ့ လက်တွဲ ပြီး ၂၀၁၅ ပွဲ
အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ပြီးးးးးး ဗိုလ်စွဲစေချင်တာကတော့ ကျတော့ဆန္ဒအမှန်ပါ။
အော်ကွယ်.. စိတ်ဓာတ်မကောင်းဒါ အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းပဲလားလို့ ကိုယ့်ထက်သာရင် စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ လက်ခုတ်တီးပေးတဲ့စိတ်ထားဂျဘာကွယ်…
ဘောလုံးပွဲ နဲ့ နိုင်ငံရေး
အမျိုးသားဘောလုံးအသင်း အင်ဒိုနဲ့ပွဲမှာ သူတို့အားလုံးရှိသမျှ
မခိုမကပ်ပဲ ကစားသွားတယ်ဗျာ။ ဆီးဂိမ်းသက်တမ်းတလျောက်ခြေစွမ်း
အကောင်းဆုံးမပြနိုင်ပေမဲ့ အဲဒီပွဲမှာတော့ အားစိုက်မူ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အသင်း ရဲ့ နောက်ခံ တာဝန်ရှိသူများရဲ့ အားထုတ်မူ့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မူ့
ခုလည်း ဒေါ်စုရှေ့မှာ ၂၀၁၅ အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသလောက်
နောက်ကလိုက်လာဖို့မရှိဘူး။ သူဘယ်လောက်သွင်းသွင်းဒိုင်ကဘက်လိုက်နေရင် ဂိုးမရဘူး။ ဒိုင်ဘက်လိုက်လို့မရအောင်နောက်ပိုင်းကလူတွေကကြိုးပမ်းရမှာ။
တကယ်တော့ ဒေါ်စု ကိုဝိုင်းရံနေသူတွေ ထောက်ခံနေသူတွေ အများစုက ဒေါ်စု နောက်ကို
တစိုက်မတ်မတ်လိုက်တဲ့သူမရှိဘူး။ အချောင်ခိုနေကြတယ်။ ပြောသမျှ လက်ခုပ်တီးခေါင်း
ငြိမ့် ပြီးပဲ နေတတ်တာခပ်များများရယ်။ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့တို့ အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ရမှာတို့ကြတော့ မတွေ့ရတော့ဘူး။ အသာလေး ဒေါ်စု ဆီက ရလာမဲ့ အကျိုးကိုတော့မျော်ကိုးတတ်ကြတယ်။
ဒေါ်စု ဘက်က ကြည့်ရင်လဲ မိန်းမသားမတန်မဲ့ အသက်အရွယ်မထောက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးဘူးဟဲ့ ဆိုပြီး (အားကိုးလောက်စရာကလည်းမရှိတာကိုး) တကိုယ်တော်ချီတတ်နေတာ။ သူ့အနေနဲ့လည်း လက်ရုံး မွေးသင့်ပါပြီ။
အားပေးသူများကလည်း လေဖမ်းဒါန်းစီး ရပ်သင့်ပါပြီ။
ဒေါ်စုဘက်ကလည်း “လာကြ ချီတတ်ကြစို့” ကြွေးကြော်သင့်ပါပြီ။
ထောက်ခံသူများကလည်း နှစ်ခါအခေါ်မစောင့်ပဲ “ရယ်ဒီလားဗျိုး” ဖြစ်သင့်ပါပြီ။
အတိုက်အခံဖက်က တဦးတယောက်ထဲကို မှီခိုတယ်ဆိုပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှုတွေမှာ အဲဒီလောင်းရိပ်အောက်က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာတာတွေ့တယ်။ သတိပြုရမှာက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် မရောက်သေးသမို့ လူအကွဲခံလို့ မရခြင်းပါ။ စစ်ဗိုလ်ဟောင်း၊သစ်တွေက အာဏဆက်ဆုပ်ကိုင်ထားမှာတော့ သေချာတယ်။ မင်းသားခေါင်း ဆောင်းရသ၍ ဆောင်းပြနေမှာဖြစ်ပြီး အခြေအနေ မဟန်လို့ သိချိန်မှာ ဘီလူးဆိုင်းကမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်အခံဖက် ဘွားဒေါ်ဂျီး သက်တမ်း၊ လုပ်နိုင်ချိန်နဲ့ စစ်ဝါဒီများရဲ့ ကုလားထိုင် ဖက်တွယ်ထားနိုင်ချိန် ကာလအတိုင်းအတာ ယှဉ်ကြည့်လျင် နှစ်ခုရွေးဂျေးဆို (အားကိုးလောက်ဖွယ် တတိယနည်းလမ်း ခုချိန်အထိ ပေါ်ကိုမလာသေး) ဘွားဒေါ်ဂျီးကိုသာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သင့်ဗာဂျောင်း….
၂၀၁၅ သည် ဒေါ်စုအတွက် နောက်ဆုံးအချီပါ။
အတိုက်အခံ တယောက်ထဲ။ စစ်တပိုင်းအစိုးရဘက်ကတော့ အသိုင်းအဝိုင်း
မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ဘယ်ဘက်က ဖောက်လိုက် (ကချင်စစ်ပွဲ………)
ညာဘက်ကဖောက်လိုက် ( ကုလား-ဗမာ အရေး)
တခါတခါ အဝေဘော (မီတာခလိုလို လက်ပံတောင်လိုလို)
အစရှိသလို တရစပ် နားခွင့်မရှိတိုက်စစ်တွေဖွင့်နေတာ။
တတိယနည်းလမ်း အထွေအထူးမရှိ။ ကြံရဖန်ရရင်တော့ ထိုင်ခုံကလွဲပြီး
ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ တွင်တွင်တောင်းတဲ့နည်းပဲရှိမယ်။
ဟေးးးးး ဒါမှ ဒို့ဒယ်ဒီကြောင်…
ဘာတွေဘာပြောပြော… ၂၀၁၅ကတော့.. ရုတ်ရုတ်သဲသဲ..နဲ့… အုန်းအုန်းထမယ်လို့…
အဲသလိုလဲ ကျတော်က မထင်ပြန်ဘူးခဗျ။
၁ ။လက်လှမ်မီတဲ့ အသင်းအပင်းတွေကို ခုကတည်းက ချိတ်ထားတယ်။
၂။ ကျေးလက်ဒေသတွေကို ခုထိ ချုပ်ကိုင်ထားတုန်း။
၃။ ဘာသာရေး ချစ်စိတ် တွေ မွေးမြုတယ်။ အောင်မြင်တယ်။
၄။ လူမျိုးရေး ကိစ္စ ကွဲပြားအောင်ဖန်တီးထားတယ်။
၅။ စား ဝတ် နေရေး နဲု့လံးချာလည်အောင် စီးပွားရေးနဲ့ချုပ်ပေးတယ်။
ဒေါ်စု ဆီ ဒီအချက်တွေနဲ့တင် လူမကျန်တော့ဘူး။ ရုတ်ရုတ် လုပ်နိုင်မဲ့အင်အားမရှိတော့ဘူ။
၂၀၁၅ အတွက်က ဒီအတိုင်းဆိုရင် NLD အစိုးရဖွဲ့လောက်တဲ့ မဲမရနိုင်ဘူး။
အေးအေးချမ်းချမ်း နဲ့ ၂၀၁၅ ပြီးနိုင်ပါတယ်။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဒေါ်စု ၆ လအတွင်း လမ်းစဉ် ဗျုဟာ ပြောင်းခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာ။
ဦးနေ၀င်းမျိုးဆက်နဲ့.. ဘိုခင်ညွှန့်အဆက်နဲ့.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့.. ဟဒ်လိုင်နာနဲ့.. ပေါင်းမိသွားရင်.. မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးက.. ခေးယော့ဖြစ်မယ်လို့.. မှန်းမိတယ်…။
နိုင်ငံရေးဆို ဂျို နဲ့လား
လူဂျီးဒွေ ဘာလုပ်မလဲ စောင့်ကြည့်နေမှာပဲ
အဲသလိုလေ နေနိုင်တဲ့သူများကိုတော့ အားကျမိပါရဲ့။
ကျတော်လဲ ဘာလို့ သည် နိုင်ငံရေးကိုများလာပြီး စိတ်ဝင်စား (ဝါသနာပါ) မိပါလိမ့်
၁။ စီပွားရေး ကုန်သွယ်ရေး
၂။ ပညာရေး သိပ္ပံ
အစရှိတာတွေကို တိုးတတ်အောင် ဆုတ်ယုတ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အရာမို့
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကတော့ စိတ်မောစရာကောင်းလိုက်တာ။ ပြည်တွင်းကလူဆိုတော့ တထိတ်ထိတ်နဲ့နေရတဲ့ဘ၀ပါ။ မကေဇီ အမြဲပြောနေသလို စစ်အစိုးရ တစ်ပြုံလုံး ဆင်းပေးစေချင်ပေမယ့် စိတ်ထဲသိနေတာ တစ်ခုရှိတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာက ဓားမိုးအုပ်ချုပ်မှ ရတဲ့လူမျိုး ။ လူတွေကို အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီလူတွေ စိတ်ကို နားလည်တဲ့လူမှ ကောင်းတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမြင်တွေက နောက်မှ။
အထက်က သူကြီးပြောသလို ၂၀၁၅ က ရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့ အုန်းအုန်းထမယ်လို့တော့ မထင်ပါ။ အဲဒီလို ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အုန်းအုန်းထမှာ ၂၀၁၄ လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
မဝင့်ပြောတဲ့ အချက်ကိုလည်း လက်ခံပါ့။
တခါတလေ စဉ်းစားမိတာက ကိုယ့် မျိုးဆက် အတွက် မဟုတ်ပဲ…..
နောင် မျိုးဆက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံ မှာ လူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝ ခံစားနိုင်အောင် အုတ်မြစ်ချနိုင်မဲ့ လူမျိုးကိုပဲမျှော်လင့်မိတာပါ။
ကျနော်တို့ အသက်တန်းတွေတော့ ထည့်ကို မတွက်တော့ပါဘူးးးး
ဒီ အာဏာရှင်အစိုးရနဲ့ပဲ တန်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြပြီးရင်း ပြရင်းမို့။
တပြုံလုံးဆင်းပေးစေချင်တယ်ဆိုတာလည်း သူတို့က မြစ်ပွါးနာလိုပဲ အမရယ်။
တစ်ယောက်လောက်ကို ချန်ထားပြီး အာဏာပေးလို့မရတဲ့ စိတ်တွေ။
အကုန်ပေါင်းလို့တောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ် ခြေဖျားမှီရင် မပြောဘူးးး
ဘရိမ်းဝှစ် ဆိုတာက ကျတော်တို့ လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လိုလားသူတွေအတွက်
ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အကြီးမားဆုံး ခံစစ်တံတိုင်းကြီးလို့မြင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း လေးငါးဆယ်
တအိအိနဲ့ ရိုက်သွင်းထားတဲ့ ရိုက်ချက်က ခုဆိုရင် ကျတော်တွေ့နေရတာက
၁။ အိမ်ထောင်စု အတော်များများ
အဲဒီနေရာတွေရဲ့ အကြီးအကဲ မှန်သမျှ ဦးဆောင်တဲ့ပုံစံတွေမှာ
၁။ ဦးနေဝင်း လိုလို
ဘယ်သူရရ မရ ငါ့ဘိုဆိုတာချည်းပဲ။
ဒီတော့တတိုင်းပြည်လုံးမှာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးက ကုလားထိုင် ပိုင်ရှင်တွေ
ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက ဒီလိုချည်းဆိုတော့
၂၀၁၄ သည်လဲ သာမာန်နှစ်တနှစ် ကဲ့သို့ပဲ ဟိုနေရာ ကျွက်စီ ကျွတ်စီ သည်နေရာ ဆူဆူပူပူ ဒီလောက်
ဒေါ်စု ရဲ့ ခြေ/ဥ ပြင်ဆက်ရေးအတွက် တန်ပြန် တိုက်ကွက်က အစိုးရဆီ
မှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေတာမို့ ထင်သလောက် အုန်းအုန်းမထနိုင်ဟုထင်ပါသည်။
၂၀၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ နှစ်တွေထိကလည်း သည်လိုပဲ ညံစီညံစီနဲ့
ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ပဲလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
စီးပွားရေး တော့ နည်းနည်းအဆင်ပြေလာကြမည်။
စီးပွားရေး အဆင်ပြေသည့်အလျောက် စက်စပ် တဲ့ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
ကုလားထိုင် လုနိုင်သည့်အင်အားပျောက်လျှင် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ ချုပ်ငြိမ်းသွာမည်။
ထိုအချိန်ရောက်လာလျှင် အစိုးရ၏ရန်သူသည် အစိုးရ သာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျတော် မှန်းကြည့်တာပါ။ ကျတော်မှန်းရင်
2014 – ASEAN Chairman (host country for over 700 meetingsayear)
2015 – Election
သင်တန်းက ဆရာပြောတာကို ပြောတာ…
တစ်ခုသိချင်တာက ဦးသိန်းစိန် တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပြီးရင် သူ့အောက်မျိုးဆက်ထဲမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လောက်တဲ့လူ ဘယ်သူများရှိလဲဟင်င်.. တကယ်မသိလို့ မေးတာပါ… မတော်..သူတို့သေသွားရင် ဘယ်သူ သမ္မတလုပ်မှာလဲဟင်င်…
သူကြီးတို့လို အင်တာနေရှင်နယ်ပရော်ဖက်ဆာ အဆင့်ရှိသူတွေကတော့သိလောက်ပြီး
ကျတော်တို့လို မနူးမနပ် ဟိုမရောက်ဒီမရောက် အနေနဲ့တော့ ကိုယ့်အတိုက်းအတာ နယ်ပယ်
ဆိုပါစို့ ကျတော့်အဖေက ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူးထောင်တယ်ဆိုပါစို့။
သူအနားယူရင် ဘယ်သူ့ကို လွဲပေးမယ်ထင်လဲ?
သူတပည့်ရင်းထဲက အားထားရတဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ပါတနာ
ကိုလဲင်္ပေးမလား? လုပ်ငန်းမှာသင့်ရုံတော်ပေမဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကောင်း
ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် တပည့်ကို လွဲပေးမလားးး?
ဒါမှမဟုတ် တတ်တတ် မတတ်တတ် သားဖြစ်တဲ့ကျတော့်ကိုပဲ သူ့ တပည့်အတော်တွေလက်ထဲအပ်ပြီး
ဒီနေရာမှာ အဖေသည် ကြံ့ဖွံ့
ဦးသေးစိမ်နေရာကတော့ ပေးနိုင်တဲ့သူ ဆက်ခံနိုင်သူ များပါတယ်။
သူ့နောက်မှာ ဘက်ဂရောင်းကောင်းတယ်လေ။ (အဲလာကိုပဲကြောက်တာ) ခုရော ဘာလုပ်တတ်လို့တုန်းးး
သူ့လောက် အရည်အချင်းက ဘယ်သူတက်တက် ဖြစ်တာပဲဟာ။ ညွန်ကြားတာလေးလုပ်၊ ခိုင်းတာလေး လုပ်၊ ရေးပေးတာလေး ဖတ်ပြရုံဟာကို။
အတိုက်အခံဘက်က ဘယ်သူလာမလည်းပဲ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မလဲပဲမသိတာ။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတုန်း အခြေခံအုတ်မြစ်ချထားနိုင်ရင်ကို ကံကောင်းမှတ်ရမယ်။
အဲတော့ ကြီးမေရဲ့ အသက်ရှင်ချိန်၊ သက်တမ်းကို ရသလောက် ဖြုန်းမှာ အချိန်ဆွဲမှာပဲ။
ဘယ်သူတွေ ထိုးကျွေးခံရဦးမလဲသာ စိုးရိမ်ရမှာ။
ကလေးကွက် ကလေးကွက်နဲ့ ခံရပေါင်းများလွန်းလို့ လုပ်တဲ့သူ အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ကို ထင်ချင်လာပြီ။